Gqibezela isishwankathelo se-iOS 4.2.1 IPhone iindaba
Isishwankathelo esipheleleyo se-iOS 4.2.1
UGonzalo R. | | iOS 4, iPhone 3G, I-iPhone 3GS, iPhone 4, Jailbreak, Izifundo kunye neencwadana
iPhone 2G (IPod Touch 1G)
1. Ungasebenzisa i-firmware yesiko kwi-Whited00r, eyongeza zonke izinto ezintsha ze-iOS 4.2.1 kwi-firmware 3.1.3
Iinkcukacha ezithe vetshe
iPhone 3G (IPod Touch 2G)
1. Ungasebenzisa isiko le-Whited00r firmware, elongeza zonke izinto ezintsha ze-iOS 4.2.1 kwi-firmware ye-3.1.3, nawe unenguqulo ye-LITE eza kusebenza kakuhle.
2. Unokwenza i-firmware yesiko engafakiyo i-baseband nge Ingqele ekhephu kusuka Windows
3. Unokwenza i-firmware yesiko engafakiyo i-baseband nge Isixhobo sePwnage kusuka IMac
4. Unokuzikhuphelela I-firmware yesiqhelo ngqo ukusuka apha.
I-iPhone 3GS (IPod Touch 3G)
1. Ungasebenzisa Ukutsho ukuba awudingi kukhululwa.
iPhone 4 (iPod touch 4G)
4. Ungahlaziya uye i-firmware esemthethweni i-4.2.1 ethintela i-baseband ekulayisheni (emva koko ungaphula ijele kunye neGreenpoison)
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 4 » Isishwankathelo esipheleleyo se-iOS 4.2.1
Izimvo ezi-25, shiya ezakho
Ndinee-3Gs ze-iPhone ezithi izolo ndenze iJalibrake nge-ultrasn0w 1.2, ihamba kakuhle kakhulu, ngaphandle kwengxaki. Ngoku, ivela eMovistar kwaye ndingathanda ukuyikhulula ukuze ndiyisebenzise nenye inkampani 🙂,
i-baseband yi-05.15.04, yakhutshwa ngaphambili, kodwa kuye kwafuneka bayitshintshele i-AppleCare kwaye bandinika entsha ngale baseband, ngaba inokukhutshwa?
Dake, kweli phepha bayakuxelela ukuba ungayenza na intolongo kwaye ukhulule kuxhomekeke kwiimodeli, iifirmwares kunye neebasebands ze iphone nganye. Kwimeko yakho, ndicinga ukuba iyasebenza, kodwa zijonge ngokwakho:
Enkosi Gnzl ngexesha lakho, umhle kakhulu!
I-iPod Touch 2G ikwaxhaswa yiGreenp0ison. Khange uyibeke !!
Enkosi, ndizokubona kamva ekhaya ... Inye into, ngoku indibeka kwi-3G "ekhangela" inethiwekhi kwaye ingaqhagamsheli kwiMovistar, kungenzeka ntoni? Ngaba i-sim iyosiwe okanye ingaba yintoni?
Oku kuhle kakhulu ukuba ukwazi ngokulula nangokukhawuleza, kodwa ulibale i-iPad ..
Isithuba esihle kakhulu, isishwankathelo esikhulu !!! gnzl
Into engacacanga ngayo yile yokuba kufanelekile ukuphuculwa ukuya ku-4.2.1 ukusuka kwi-iphone 4 yam eno-4.1, esebenza kakuhle… ingaba ndilahlekelwe yinto ebalulekileyo ngolu hlobo?
Ngaphezulu kwayo yonke iphone yam
Ndibulela u-Onio ngekhonkco, ndiyabona ukuba kuninzi okuphulukana nokufumana, ngokufaka i-baseband njengoko isiza kwikhonkco ondinike lona, ​​ndiphulukana newaranti ye-iPhone kwaye andiyithandi loo nto, kuba ndinayo inkathalo yeapile iminyaka emithathu… Ndiza kujonga ukuba okwethutyana kulula na ukukhupha ifowuni…. umba kukuba ndaye ndashiya iMovistar ndahlawula isohlwayo, kufuneka bandikhulule kodwa akukho ndlela, banam artito!
@Yenza i-iPhone ikhutshwe ngokuphelisa ukuhlala, ukuba ubalekile ngaphambi kokuyiphelisa nangona amaphepha engayikhuphi. Bandixelele ke.
@Gnzl: kodwa inyanzela ukuba i-GPS ihlale isebenza, akunjalo? ukuba kunjalo, kukuntywila kwebhetri rhoqo kunzima ukuthethelela, awucingi?
I-iPhone 4 iyayicima i-GPS kwaye iyivule ngokuzenzekelayo xa uyidinga, ke akusayi kuphinda kuchithe ibhetri, xa ifumana i-iPhone yam icela indawo eza kuvula i-GPS.
Indoda, etshintsha izinto kakhulu. Enkosi ngengcaciso. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba ndiza kulinda uhlobo olulandelayo ... ikakhulu ngenxa yobuvila ... uyazi, ukuba into iyasebenza, sukuyichukumisa xD
Molo, ndinengxaki, ndihlaziyile ukuya ku-4.2.1 ukusuka ku-4.1 ngaphezulu kwayo nayiphi na into yokufumana iphone yam kodwa ndiyaqonda ukuba xa ndizama ukwenza ixesha lobuso lihlale lilinde ukwenziwa kwaye lingasebenzi kwaye ngaphambili ngo-4.1 ukuba Ndingazifumana naziphi na iingcebiso ezingenangqondo.
Molo ndine-iPhone 4 (AT & T) endiyithengileyo nge-firmware 4.1 kunye ne-baseband 2.10.04. Ngokwazi kwam andinako ukuyikhulula 🙁
Ndingayibeka i-4,2 ngaphandle kokuguqula i-firmware kwaye ndikwazi ukuyikhupha kwixa elizayo xa iphuma i-ultrasn0w ye-2.10.04 ??? Ngaba ndiyayidinga i-SHSH ??? Ndiyathemba ukuba umntu othile angandinceda 🙂
Enkosi ngephepha kunye nesishwankathelo
Ndikwinguqulelo 4.1, kodwa ukuba ndiyayifaka ipad baseband 06.15.00, ndingaphelelwa yigps? Nditsho ukuze ndikwazi ukuyikhupha: S okanye kungcono ndilinde?
Ngaba ikhona indlela kwaye kwimeko yokuvuma njani? ukuya ejele kunye nokukhupha i-iphone 3gs ios 4.2.1 kunye nemodem yenguqulo leyo kwaye uyenze ingafakwanga.
Ndiye ndayokusebenzisa i-redsnow inguqulelo yamva nje kwaye ndicinga ukuba iyabethwa kwaye ayinamsebenzi…. le yokugqibela ayiguquli i-baseband kwi-ipl dl. ikhona into oyaziyo?
Nceda nceda !!!
kunye neposti entle kakhulu !!!
UNacho Casas sitsho
Njengesiqhelo, Wugqwesile wonke umsebenzi wakho gonza !!! ngokubhekisele
Phendula kuNacho Casas
Isishwankathelo esihle kakhulu, kuthekani ukuba, kwimiba ye-3GS ibandakanya i-bootrom (MC) entsha okanye endala nje?
Molo ndine-iphone 4, uguqulelo 4.2.1, ukhuphele inkqubo greenpoison, yeewindows, ndilandela imiyalelo kwaye ngokomgaqo iselfowuni iyenza yonke into igqibelele ... kodwa i-icon ye-loader ayiveli.
Yintoni endiyenzayo engalunganga?
Molo, ndiyenzile i-jalibreak nge-firmware yesiko, kodwa andilufumani ukhetho lwabaqhubi, ndinosimyo kwaye andifumani kugubungela. Ndingenza ntoni?
ipod touch sitsho
kwaye mna ndichukumisa ipod yam nge-3.1 oko kulihlazo
Phendula ipod touch
IREB RC3 isisombululo kwiimpazamo ezili-16xx xa ubuyisela
I-WhiteD00r 4.2 iFirmwares yesiqhelo iOS 4.2.1 ye-iPhone 2G kunye ne-3G (iPod Touch 1G kunye 2G)